होसै उडाउने झोलाको मूल्य
एजेन्सी । सेलिब्रिटीले अनुशरण गर्ने फेसन, उनीहरुले प्रयोग गर्ने भौतिक चिजबिजहरुको चासो हरकोहीलाई हुने गर्छ । फेसनको मामिलामा बलिउडको बेबो यानि करिना कपुर खान निकै अगाडि छन् ।
हालसालै उनी परिवारसँग दस दिने होलिडे मनाएर स्वदेश फर्किने क्रममा मुम्बई विमानस्थलमा देखा परिन् । साथमा सैफ अली खान र छोरा तैमुर अली खान पनि थिए । यद्यपि अधिकांशको ध्यान भने करिनाको नयाँ झोलामा गयो ।
नजाओस् पनि कसरी ? झोलाको मूल्य ट्याग हटाइएको थिएन र सो मूल्य हेर्दा सबैको होस उडाउने खालको जो थियो । बलिउड लाइफ डटकमका अनुसार हर्मिज बर्किन ब्रान्डको उक्त झोलाको मूल्य १३ लाख ३१ हजार भारु पर्न जान्छ ।
छैन त होसै उडाउने खालको ? मूल्य ट्यागसहितको झोला भिर्नुलाई फेसन सेन्स भएको मान्न सकिँदैन । यस्तोमा करिनाले हतारमा ट्याग हटाउन भुलिन् या बिहेपछि उनको फेसन सेन्स हराउँदै गएको हो उनी नै जानून् ।
करिना कपुर खान